Amaqhinga okuthatha ithuba kwiikhowudi ezifihliweyo zeNetflix kunye neemenyu | Iindaba zeGajethi
Ukuba ungumsebenzisi weqonga levidiyo elaziwayo Netflix Ndiqinisekile ukuba uyayithanda le post kuba siza kuthetha ngeendlela ezahlukeneyo zokusebenzisa zonke izinto ezilungiselelwe iqonga kwaye mhlawumbi, kungenxa yokungazi okanye ngokoqobo kuba awuzange ume ucinge ngako, uye waqaphela de namhlanje.
Okwangoku phambi kokuba uqhubeke, ndikuxelele ukuba nkqu nabancinci 'amaqhingaendiza kukuxelela yona iya kukwenza uphulukane neempawu zakho zomsebenzisi kuba singajonganga Naluphi na uhlobo lwentshukumo olungekho mthethweni okanye iqonga elibona ukuba awukwazi ukwenza. Zizenzo nje eziza kukunceda usebenzise ukusetyenziswa kweNetflix ngakumbi, ulawulo lwayo, ukusetyenziswa kwedatha ...
1 Dlala umxholo ngokungacwangciswanga
2 Guqula imbonakalo yemibhalo engezantsi
3 Cima ilog yomsebenzi wakho
4 Lawula ukusetyenziswa kwedatha
5 Ngubani osebenzisa iakhawunti yakho yeNetflix?
6 Fumana indawo eninzi yokukhuphela
7 Zama zonke iindaba phambi komnye umntu
Dlala umxholo ngokungacwangciswanga
Ngokuqinisekileyo ngamanye amaxesha uzifumene ukwimeko yokuba, nangona unexesha kwaye unqwenela ukubona uhlobo oluthile kuthotho okanye ifilimu, inyani kukuba ubukhe wakhangela kwikhathalogu enkulu enesimo sakho seNetflix kodwa ngelishwa akukho nto ibonakala ukuba lolona hlobo lomxholo ufuna ukonwabela.
Ngale nto, namhlanje ndicebisa indlela elula kakhulu yokubona umxholo ongacwangciswanga, into elula njengokunika ithuba kuthotho okanye imovie ongayaziyo kodwa, kuba ibingenguye oyikhethileyo, uyinika ithuba lokujonga ukuba ekugqibeleni Uyamangaliswa okanye ngokuchaseneyo uyeke ukukubona emva kwemizuzu embalwa.
Ukuba unomdla wokubona uthotho ngokungacwangciswanga, xelela ukuba ekuphela kwendlela yokwenza eli nyathelo, ubuncinci okomzuzwana, kukufikelela kwiphepha UFlix Roulette, portal yasimahla yonke into eyenzayo isebenza ngokungathi ivili le-roulette. Into ekufuneka uyenzile kukuseta uthotho lweefilitha ngokokukhetha kwakho ukuze kuvele isiphumo esinye, esinokuba ngumxholo ekufuneka uwabonile.
Guqula imbonakalo yemibhalo engezantsi
Ukuba ukhe walubona naluphi na uhlobo lomxholo kwiNetflix engekho kulwimi lwakho, ngokuqinisekileyo uya kuyazi ukuba kanjani vula imibhalo engezantsi, umhlobo omkhulu lowo, mhlawumbi amaxesha ngamaxesha, awuboniswanga ngobuhle okanye izitayile ezifanelekileyo kakhulu, ngakumbi ukuba uninzi lwemovie okanye uthotho lwenziwa kwindawo ecacileyo apho ukusetyenziswa kweeleta ezimhlophe kusenokungabi elaneleyo kakhulu kuba isiqingatha samagama asinakufundwa.
Ngenxa yokuba esi sesinye sezikhalazo ezisasazeke kakhulu kuluntu olungemva kweNetflix, inkampani inesisombululo esinomdla kakhulu esenzekayo, ngokuchaseneyo nento onokuyicinga, ngokuyeka ukusebenzisa usetyenziso oluqhele ukulisebenzisa kwithebhulethi yakho, kwi-smartphone okanye kumabonwakude i iphepha leenkonzo enikezelwa yiNetflix uqobo. Kuya kufuneka ufake iziqinisekiso zakho, oko kukuthi, igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha, kunye khetha umbala owuthanda kakhulu kwimixholo engezantsi.
Cima ilog yomsebenzi wakho
Njengoko uyazi kakuhle, iNetflix igcina yonke into oyibonayo, nokuba ungancomela izihloko ezinomxholo ofanayo okanye ukukhumbuza ukuba useneziqendu zothotho oluthile ongekaziboni. Oku kuyinyani kukuba kulungile kakhulu ukuba awukaqali ukubona imovie ongayithandiyo ngenxa yomgangatho okanye umxholo kwaye ugqibe ukususa okanye uthotho ongakhange uqhubeke ngalo, amatyala amabini ngokukodwa leyo, njengoko kunjalo, awufuni ukuba iqonga liqhubeke nokukucebisa ngokufanayo.
Nangona unokucinga ngenye indlela, inyani kukuba kukho indlela yokufezekisa susa umxholo othile kuluhlu lwakho lwezixhobo zokumamela ozisebenzisileyo njengomsebenzisi kwaye ngenxa yoko kuya kufuneka fikelela kweli phepha, ikwaphuhlisiwe, yabeka i-intanethi kwaye igcinwe yiNetflix uqobo, apho ungasusa khona lo mxholo.
Njengeenkcukacha, ndikuxelele kancinci 'iqhinga'Kweli candelo kwaye eli phepha liyakunceda nawe bona ukuba yeyiphi imixholo ezinye iiprofayili ezikule akhawunti ezisebenzisileyoOko kukuthi, ukuba ungomnye wabo bahlala babelana ngeakhawunti nabantwana babo, izalamane ... eli phepha likubonisa noko bebekade bekubona kwaye nini.
Lawula ukusetyenziswa kwedatha
Uninzi lwabasebenzisi abathi, ngamanye amaxesha, kakuhle kuba bakwiholide, kuhambo ... ngokufutshane, ngezizathu ezahlukeneyo, ekugqibeleni kufuneka basebenzise uqhagamshelo lwedatha ukuqhubeka nokubukela la manqaku okanye imovie abayithandayo kwaye , ngandlela-thile, ngomzuzwana othile banokuqhubeka nokubona.
Njengokuba iphindaphindeka, iNetflix icinge ngale ndlela kwaye, ukuze singayisebenzisi inqanaba lethu ngaphandle kwesaziso sangaphambili, isicelo, ngaphakathi kwecandelo Useto Inecandelwana elibhaptiziweyo ngegama lika Ukusetyenziswa kwedatha. Kukolu khetho apho sinokumisela umgangatho weevidiyo esizibukeleyo. Olu phawu lunokuba Baja, apho unokujonga khona ukuya kuthi ga kwiiyure ezi-4 zevidiyo ngokutshintshela igiga yokusebenzisa, Media, apho ixesha elidlulileyo lincitshisiwe laya kwiiyure ezi-2 ukugqiba ngalo Alta Apho ungabona khona iyure enye kuphela kwigrig edliweyo.
Ngubani osebenzisa iakhawunti yakho yeNetflix?
Ukujonga inani lezihlandlo apho sifunda khona iindaba apho iqela labakhohlisi likwazile ukuba iziqinisekiso zokufikelela kwiinkampani ezininzi, asinakuze siqiniseke ukuba abantu obathembileyo bokuba ufikelele kwaye benze iprofayili. ngabo basebenzisa iakhawunti yakho okanye omnye umntu usebenzisa isibonelelo sakho kwinkonzo ngaphandle kwemvume yakho.
Oku kunokwenzeka ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo kuba kunokuba bahlasele iiseva zeNetflix kwaye bebe izigidi zeenkcukacha zomsebenzisi, kubandakanya neyakho, ehlasela enye inkonzo yelifu kwaye usebenzisa iziqinisekiso ezifanayo kuwo omabini amaqonga okanye, ngasizathu sithile, esinye sezihlobo zakho, ngamanye amaxesha, siye sanikezela ngeziqinisekiso zakho komnye umntu okanye sangena nje kwisicelo esingafakwanga kwisixhobo sabo, silibale kamva ukuvala iseshoni.
Ukusombulula le ngxaki sinokuhlala sihamba kule nto Iphepha leNetflix singadibana phi Imbali yakutshanje yayo yonke imisebenzi yeakhawunti kunye nokujonga icacisiwe gca kuba sibonisiwe uluhlu olubandakanya umhla kunye nexesha, indawo ekungenwe kuyo kunye nesixhobo umntu angene ngaso kwiakhawunti.
Ukuba into esiyifunayo kukuphinda silawule, kuya kufuneka wenze njalo phuma kuzo zonke izixhobo Kwaye, njengoko sele iyinto ephindaphindayo kwesi sithuba, ukuba awufuni kuhamba ngemenyu yomsebenzisi wesicelo, nawe unayo iphepha lewebhu lo msebenzi uwenza ube lula kuwe.
Fumana indawo eninzi yokukhuphela
Njengoko uyazi, ngakumbi ukuba ungumntu odla ngokuhamba rhoqo kwaye usebenzisa inyani yokuba ngaphezulu konyaka okanye ngaphezulu, iNetflix ikunika ithuba lokukhuphela uthotho lwakho kunye neemovie zakho ozithandayo kwisixhobo sakho Ndiyakwazi ukubajonga ngokuzolileyo ngaphandle kokuchitha ireyithi yakho yedatha.
Ingxaki koku kuxa ufuna izinto ezininzi kuba uya kuba lixesha elide ngaphandle kokukwazi ukunxibelelana ne-intanethi ngenqanaba ledatha elisicaba. Unokukuxelela ngamava ukuba umthamo wesixhobo sakho, ngaphandle kokuba unegigabytes ezingaphezulu kwekhulu, unokuncitshiswa kakhulu.
Ngeli xesha kuya kufuneka ube ngumsebenzisi Android ukuze ukwazi ukusebenzisa oku kuncinci 'iqhinga', into elula njengokuya kwimenyu yoqwalaselo kwaye emva koko ukhethe uqwalaselo lwe-App. Ngaphakathi kokukhetha okubonisiweyo xa ufikelela kule menyu kuya kufuneka ufake leyo ibizwa ngokuba yi Khuphela Indawo Ukukhetha i Ikhadi le-SD. Ngale ndlela ilula, lonke uthotho olukhuphelayo luya kugcinwa ngqo kwikhadi le-SD hayi kwimemori yangaphakathi ye-smartphone yakho.
Zama zonke iindaba phambi komnye umntu
Ukuba unomdla ngeqonga leNetflix ngokubanzi nayo yonke into enokukunika yona njengomsebenzisi, ngokuqinisekileyo uya kufuna ukwazi ukuba ungazibona njani zonke iintlobo zomxholo omtsha phambi komnye umntu kwaye ngakumbi ukuzama ukuzixabisa zonke zizezakho. Amava ezo zinto zintsha zizayo neziza kubakho Namhlanje baninzi abantu abasele benazo.
Ukufezekisa oku, xelela ukuba, njengakumaqonga amaninzi, kuya kufuneka ubhalise kwicandelo le- ukuthatha inxaxheba kuvavanyo, into onokuyenza ukufikelela kweli phepha likhethekileyo. Njengeenkcukacha, xelela ukuba oku kukunika ithuba lokukhetha yiNetflix uqobo ukuze ukwazi ukuvavanya umxholo omtsha phambi komnye umntu kodwa kukwakhona ukuba awuyi kukhethelwa uvavanyo oluthile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Amaqhinga ama-7 okuthatha ithuba lokufihla iikhowudi zeNetflix kunye neemenyu
UWiko Ufeel Prime, siyakuxelela ukuba le ndlela iphakathi isothusa njani [UPHANDO]